1 Korintofo 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nea Edi Kan a Ɔde Kɔmaa Korintofo 3:1-23
Korintofo da so ara di ɔhonam akɔnnɔ akyi (1-4)
Onyankopɔn na ɔma enyin (5-9)
Onyankopɔn mfɛfo adwumayɛfo (9)
Fa nneɛma a ogya ntumi nhyew to si fapem no so (10-15)
Moyɛ Onyankopɔn asɔrefi (16, 17)
Wiase nyansa yɛ nkwaseasɛm wɔ Onyankopɔn anim (18-23)
3 Enti anuanom, mantumi ankasa ankyerɛ mo sɛ nnipa a Onyankopɔn honhom kyerɛ mo kwan,+ na mmom mekasa kyerɛɛ mo sɛ nnipa a wodi wɔn akɔnnɔ akyi, nnipa a wɔyɛ mmofra+ wɔ Kristo mu. 2 Nufu na mede maa mo, ɛnyɛ aduan a ɛyɛ den, efisɛ na mo ho nyɛ den. Na seesei mpo, mo ho nyɛ den,+ 3 efisɛ moda so ara di ɔhonam akɔnnɔ akyi.+ Na bere a ahoɔyaw ne mansotwe wɔ mo mu yi, ɛnyɛ ɔhonam akɔnnɔ akyi na mudi anaa,+ na ɛnyɛ sɛnea wiase no nantew na mo nso monantew anaa? 4 Na sɛ obi ka sɛ, “Meyɛ Paul dea,” na obi foforo nso ka sɛ, “Meyɛ Apolo+ dea” a, ɛnyɛ nea wiase no yɛ no ara bi na mo nso moreyɛ anaa? 5 Ɛnde, hena ne Apolo? Na hena ne Paul? Yɛyɛ asomfo+ a yɛyɛ adwuma a Awurade de ahyɛ yɛn nsa, a monam yɛn so abɛyɛ gyidifo. 6 Me de, miduae,+ Apolo guguu so nsu,+ nanso Onyankopɔn na ɔma ɛkɔɔ so nyinii. 7 Enti ɛnyɛ nea odua na ɔyɛ biribi, ɛnna ɛnyɛ nea ogugu so nsu nso, na mmom Onyankopɔn a ɔma enyin no.+ 8 Nea odua ne nea ogugu so nsu no yɛ baako,* nanso wɔn mu biara benya n’ankasa akatua sɛnea n’ankasa adwuma te.+ 9 Efisɛ yɛyɛ Onyankopɔn mfɛfo adwumayɛfo. Moyɛ Onyankopɔn afuw, Onyankopɔn dan.+ 10 Sɛnea Onyankopɔn adom a minyae no te no, metoo fapem+ sɛ ɔdansifo a onim adwuma paa,* nanso obi foforo na ɔreto asi so. Enti ma obiara nkɔ so nhwɛ sɛnea ɔreto asi so no yiye. 11 Efisɛ obiara nni hɔ a obetumi ato fapem foforo biara, gye nea wɔato dedaw no. Ɛno ne Yesu Kristo.+ 12 Na sɛ obi de sika kɔkɔɔ, dwetɛ, aboɔden abo, nnua, sare, anaa wura a awo si fapem no so a, 13 obiara adwuma bɛda adi; ɛda a wɔbɛsɔ ahwɛ no na ɛbɛda adi, efisɛ ogya na ɛbɛma ada adi,+ na ogya na ɛbɛkyerɛ sɛnea obiara sii ne dan. 14 Sɛ obi adwuma a wato asi fapem no so gyina a, obenya akatua. 15 Sɛ obi adwuma hyew a, ɔbɛhwere ade, na n’ankasa de, wobegye no nkwa; nanso ɛbɛyɛ sɛ nea wɔagye no afi ogya mu.* 16 Munnim sɛ moyɛ Onyankopɔn asɔrefi,+ na Onyankopɔn honhom te mo mu+ anaa? 17 Sɛ obi sɛe Onyankopɔn asɔrefi a, Onyankopɔn bɛsɛe no; efisɛ Onyankopɔn asɔrefi ho tew, na asɔrefi no ne mo ara.+ 18 Mma obiara nnnaadaa ne ho. Sɛ mo mu bi adwene yɛ no sɛ ɔyɛ onyansafo wɔ wiase yi* mu a, ma ɔnyɛ ɔkwasea, na watumi ayɛ onyansafo. 19 Na wiase nyansa yɛ nkwaseasɛm wɔ Onyankopɔn anim, efisɛ wɔakyerɛw sɛ: “Afiri a anyansafo de wɔn anitew asum no, ɔma eyi wɔn ankasa.”+ 20 Wɔakyerɛw bio sɛ: “Yehowa* nim sɛ anyansafo nsusuwii yɛ kwa.”+ 21 Enti mma obiara mmfa nea nnipa tumi yɛ nnhoahoa ne ho, efisɛ ade nyinaa yɛ mo de. 22 Paul oo, Apolo oo, Kefa* oo,+ wiase oo, nkwa oo, owu oo, nneɛma a ɛwɔ hɔ nnɛ oo, nneɛma a ɛrebɛba oo, ade nyinaa yɛ mo dea; 23 mo nso moyɛ Kristo de;+ ɛnna Kristo nso yɛ Onyankopɔn dea.
^ Anaa “wɔ atirimpɔw baako.”
^ Anaa “ɔdansifo nyansafo.”
^ Anaa “ɛbɛyɛ sɛ nea ɔnam ogya mu.”
1 Korintofo 3